Wada-hadalladii Qubrus oo Heshiis La'aan Dhammaaday
Wada-hadallo ay QM ku agaasintay dalka Switzerland oo looga gol lahaa in lagu dhammeeyo is-marin waaga muddo ka badan afartan sano kala qeybiyey jasiiradda Qubrus, ayaa dhammaaday ayada oo aan wax heshiis ah lagu gaarin.
Xoghayaha guud ee QM, Antonio Guterres ayaa yiri “nasiib darro…heshiis suurta-gal ma noqon, shirkuna wuxuu soo xirmay ayada oo ay suurta-gali weysay in xal looga gaaro dhibaatadan mudda badan jirtay.”
Shirkan ay QM dooneysay in lagu mideeyo jasiiradda Qubrus, ayaa waxaa ka qeyb-galay hoggaamiyayaasha Greek iyo Turkish-ka Qubrus, iyo wakiilo ka socday saddexda dal ee xiisaddan ay ka dhex oogan tahay ee kala ah Greece, Turkey iyo Britain oo horey u gumeysan jiray. Saraakiil sare oo ka socotay Midowga Yurub ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa.
Qubrus ayaa kala qeybsaneyd tan iyo sanadii 1974-kii, markaasi oo ciidamada Turkish-ka ay qabsadeen waqooyiga dalkaas, ayaga oo ka jawaabaya kacdoon ay ka dambeeyeen Greek-ga.
Illaa 35 kun oo askari oo Turkish ah ayaa weli ku sugan dalkaas.
Dadka kasoo jeeda Greek ee Qubrus ayaa ciidamadaas u arka halis, waxayna doonayaan inay ka baxaan, hase yeeshee Turkish-ka Qubrus ayaa u arka kuwa damaanad qaadaya amnigooda.